योनि फर्मि ge्ग जेल पुनरुद्धार १०० - VC- गोप्य
योनि कस कस जेल पुनरुद्धार १००
भर्जिनिया क्यारा योनी कस जेल REVITALIZE 100 एक विशेष जेल हो जसले यो निश्चित गर्दछ कि महिलाको आत्मीय क्षेत्र फेरि कडा महसुस हुन्छ।
नियमित प्रयोगको साथ, योनी क्षेत्रमा छाला दृढ हुन्छ र यौन संभोग बढी तीव्र हुन्छ। पुनरुद्धार १०० एक पौष्टिक जेल हो, जुन महिलाको घनिष्ठ क्षेत्रमा संवेदनशील छालाको लागि विशेष रूपले विकसित गरिएको हो। यो लागू भए पछि योनीलाई तंग लाग्दछ र तपाईं कुमारीको महसुस गर्नुहुन्छ।
उत्पादनले कसरी काम गर्दछ?
योनिको वरिपरि जेलको सामान्य मात्रा लागू गर्नुहोस् र योनिको प्रवेश द्वार र ल्याबियाको वरिपरि समान रूपमा वितरण गर्नुहोस्। रमाईलो बनावटले सुनिश्चित गर्दछ कि जेल सजिलैसँग फैलिन सजिलो छ। विशेष संरचनामा धेरै फूल र बोटका अर्कहरू छन्, जसमा एलानटोन, क्यालेन्डुला र एलोभरा, बोक्सी हेजल एक्स्ट्र्याक्ट र क्यामोमिल्ला एक्स्ट्र्याक्ट समावेश छन्। सक्रिय सामग्रीको देखभाल र पुन: निर्माण गुणहरूको लागि धन्यवाद, योनी नरम र फर्मर हुन्छ। जेलको हल्का गन्ध छ र छिटो अवशोषित हुन्छ।
बोक्सी हेजल कडा छ। यसले सूजिएको टिश्युहरू र सिक्कीबाट खुजली र जलन हुन्छ। यो प्राकृतिक ट्यानिन मा समृद्ध छ कि सूजन, सूजन ऊतकों र pores कडा गर्न सकोस्। बोक्सी हेजलले पनि गैलिक एसिड समावेश गर्दछ, जससँग एन्टिवाइरल र एन्टिफंगल गुणहरू छन्।
यो ईन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी, एन्टिफंगल, र जीवाणुरोधी गुणहरूका लागि सबैभन्दा सामान्य र प्रख्यात घटक हो योनीमा स्वस्थ सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्न। यसले सेल पुनर्जनन पनि बढावा दिन्छ, किन यति धेरै सौंदर्य उत्पादनहरूमा फेला पर्दछ। योनि कोशिका कोर्जन पुनर्जीवन र स्वस्थ छाला बहाल गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यामोमिल्ला रिकुटिटा फूल अर्क
सुक्खा क्यामोमाइल फूलहरूमा धेरै टेर्पेनोइड्स र फ्ल्याभोनोइड हुन्छन् जसले उनीहरूको औषधीय गुणहरूमा योगदान गर्दछ। यो प्राकृतिक रूप बाट शान्त र सहयोगी गुणहरु को छ र एक प्राकृतिक अक्षय स्रोत हो। यसले सूत्रमा इमोलियन्ट र मोइश्चराइजिंग गुणहरू थप्न मद्दत गर्दछ।
अलान्टोइन कम्फ्रे प्लान्टको बोटानिकल एक्स्ट्रक्टमा फेला पर्दछ। यसले योनीको भित्ताहरूलाई कायाकल्प गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ यसको फाइदाजनक प्रभावहरूका लागि धन्यवाद बाह्य कोशिकाहरूको पानीको मात्रा बढाउँदै र मृत छाला कोषहरूको माथिल्लो तहहरूको एक्स्फोलिएसन सुधार गरी मोइस्चराइजिंग र केराटोलाइटिक प्रभावहरू। यसले छालाको कोमलता बढाउँछ र कोशिकाको विस्तारले घाउलाई निको पार्छ र यसरी शान्त, सुखदायक र छाला-सुरक्षा प्रभाव पार्छ।
पेपरमिन्टलाई जोसिलो, एन्टिसेप्टिक, ईमेटिक र उत्तेजकको रूपमा लिइन्छ। सामयिक पेपरमिन्ट सप्लीमेन्ट्स खुजलीलाई शान्त पार्न र जलन र जलन हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको एन्टिसेप्टिक, जीवाणुरोधी, एन्टिफंगल र एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरूले क्यान्डिडाबाट फgal्गल संक्रमण रोक्छ। पीरद्वार ऐंठनहरू र एक पीरियस कारण मतली तिनीहरूको मद्दत को लागि धन्यवाद राहत पाउन सकिन्छ। Peppermint एक मांसपेशी आराम गर्ने को रूप मा काम गर्दछ र यसले पेटको समयमा दुखी कम गर्दछ। पानीको साथ पातलो पेपरमिन्ट तेल छालाको समस्याहरू जस्तो कि दागहरू र सुख्खा छालाबाट राहत पाउन धुलाई डिन्डर्जन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। संक्रमण, खुजली, एलर्जी रेशेस, र ब्याक्टेरिया संक्रमण सबैलाई पेपरमिन्टको साथ उपचार गरिएको छ र योनि स्वास्थ्य संतुलित राख्न मद्दत गर्दछ।
शिपिंग खाली छ, ब्राउन शिपिंग बक्समा सामग्रीको कुनै सन्दर्भ बिना।
सबै भुक्तानी विकल्पहरू सुरक्षित छन्! त्यहाँ तपाइँको क्रेडिट कार्ड वा बैंक स्टेटमेन्टमा उत्पादनहरूको सन्दर्भ छैन, र भर्जिनियाकेयर ब्रान्डको कुनै उल्लेख छैन।
Revitalize100 का फाइदा:
योनीको प्रवेशद्वार कडा गर्दछ
छालाको छाला कम हुन्छ
स्नेहकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
कन्डमको साथ सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिन्छ
१००% प्राकृतिक अवयवहरूबाट बनाइएको
गर्भावस्था पछि योनी हेरचाहको लागि पनि आदर्श
सामग्री ml० मिलि: